၈ ဂဏန်းသမားများအကြောင်း တစေ့တစောင်း – Trend.com.mm
မည်သည့်လတွင်မဆို ၈၊ ၁၇၊ ၂၆ ရက်မွေးသူများကို ၈ ဂဏန်းသမားများဟုခေါ်သည်။
အရာရာတွင် ထိန်းချုပ်နိုင်သောစိတ်ရှိသလောက် မေတ္တာတရားတွင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိ။ ချစ်သူကို အလိုလိုက်လွန်း၊ဦးစားပေးလွန်းသဖြင့် စိတ်သောက ခံစားရတတ်သည်။ ချစ်သူကို အရာရာပြည့်စုံစေလိုသဖြင့် ပေးဆပ်တတ်သော သဘာဝကြောင့် မိမိနှလုံးသားကို ခုတုံးလုပ်ခြင်း
သီးသန့် အေးချမ်းစွာနေတတ်ပြီးမနာလိုဝန်တိုခြင်းကင်းသော ကြီးမြတ်သည့် နှလုံးသားအား ပိုင်ဆိုင်သည်။ မိမိကိုယ်မိမိ အထီးကျန်ဆန်ကာ အားငယ် နေတတ်သော ခံစားချက်ရှိသည်။ သူတစ်ပါးပစ်ပယ်ထားသူကို စာနာစိတ် အပြည့်နှင့် မေတ္တာ ထားတတ်သည်။
-မင်းရဲ့ ဘ၀ဟာ ကြမ်းတမ်းလွန်းပါတယ်. ဘာကြောင့်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မင်းကို
-သူတပါးကို အပြစ်ပြောရာမှာ မင်းဟာ တဖက်ကမ်းခတ် ကျွမ်းကျင်လှပါတယ်။
-အခြေအနေက မပေးဘူးဆိုရင်တော့.. မင့်ရဲ့မိဘတွေကိုတောင် စောစီးစွာ
လက်လွှတ်ရနိုင်ပါတယ်.. ဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေက မင့်ဘ၀ထဲမှာ မကြာခဏဖြစ်နေမယ်အရာတွေပါ။
ဒီပြဿနာတွေကပဲ မင်းရဲ့ပညာရေးကို တားဆီးနေပါလိမ့်မယ်.. ဒါပေမယ့် မင်းဟာ ဘ၀ကို တခြားနည်းနဲ့ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
-မင်းဟာ တရားမျှတမှုအတွက်လည်း တိုက်ပွဲဝင်ရဲတဲ့သူတစ်ဦးပါ
-ပုံမှန်အားဖြင့်..မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆက်ဆံရာမှာ မင်းဟာ တည်ကြည်လေးနက်စွာ နေတတ်ပေမဲ့
ဘ၀ကိုလည်း..အထီးကျန်စွာ ဖြတ်သန်းနေရမယ့်သူပါ.. ပြီးတော့ တပါးသူကို ကူညီဖို့အသင့်ရှိနေသူ တစ်ဦးပါ။
-မင်း အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါမှာတော့ (အဲဒါကလည်း.. အများအားဖြင့် အလယ်အလတ်အရွယ်မှာပဲဖြစ်ပွားတက်ပါတယ်) မင့်ရဲ့ကံကြမ္မာဆိုးအနည်းငယ်ဟာ လွင့်ပျောက်သွားသလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်..ပြီးတော့ မင်းဟာ လုံခြုံချမ်းမြေ့မှုကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။
-မင်းဟာ မမျှော်လင့်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်း..ယှဉ်ဆိုင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်.. ဥပမာ..(
-သို့ပေမဲ့… မင်းဟာ စည်းကမ်းလိုက်နာတဲ့သူ..လုံ့လ၀ီရိယရှိသူ.ရဲရင့်သူ..
-အဲဒါတွေကပဲ မင်းကို အောင်မြင်မှုဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားမှာပါ..
-မင်းဟာ မိသားစုရဲ့ အဓီက အစိတ်အပိုင်းတခုပါ..အားကိုးရဆုံးသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီး.. ဖိုက်တာတစ်ဦးလည်းဖြစ်နေပြန်ရော။
-မင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးအဖော်မွန်ကတော့.. 1, 4, and 8. သင့်တော်တဲ့အဖော်မွန်ကတော့5.
၄ ကို ၂ နဲ့ မြှောက်လို့ ၈ ရလာတဲ့အခါ ၄ ရဲ့နှစ်ထပ်ကွမ်း
စွမ်းအားတွေပါလာသလို စနေရဲ့ လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်မှုတွေပါ ပါဝင်လာပါတယ်။ ၈
ဂဏန်းစိုးမိုးသူတွေကတော့ ၈၊ ၁၇ နဲ့ ၂၆ မှာမွေးဖွားပါလိမ့်မယ်။ဒဏ္ဏာရီမှာတော့ ခြေကျိုးလို့ အမည်တွင်ပြီး ကောင်းကင်မှာ ရေခဲဂြိုလ်လို့မြင်နေရတဲ့ စနေစိုးမိုးသူ ၈ ဂဏန်းသမားတွေကျတော့ လျှို့ဝှက်တယ်။အေးတိအေးစက်နိုင်တယ်။မြုံစိစိသမားတွေလည်းဖြစ်တယ်။စိတ်ခံစားချက်အလွန်ကြီးမားသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကို အင်မတန်နားလည်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဘုဂလန့်ကျတဲ့ ၄ ရယ်၊ အေးစက်စက် ၈
ရယ်ကြောင်းဆက်ဆံရေးဟာ မချောမွေ့နိုင်ပါဘူး။ သတိထားရပါလမ့်မယ်။
သူတို့ရဲ့ အများနဲ့ မတူတဲ့ စတိုင်တွေ၊ စကားလုံးတွေကြောင့် စိတ်ထဲခိုးလို့ခုလုတော့ ဖြစ်ရမှာ ကျိန်းသေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့မွေးဖွားရာရာသီတွေက မကာရ၊ ကုံလိုမျိုးရာသီတွေသာဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့စရိုက်တွေက ပိုပေါ်လွင်လာမှာပါ။
သူများတွေကို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ဖုထစ်စေတဲ့ အဲဒီ ဂဏန်းနှစ်ခုဟာ
၀ဋ်တော့ပြန်လည်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလည်လဲဆိုတော့ ၄နဲ့ ၈ သမားနှစ်ဦးစလုံးဟာ
လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးတွေဖြစ်ရင် ဖြစ်၊ မဖြစ်လို့ကတော့အိမ်ထောင်ကျနောက်ကျတော့တာပါပဲတဲ့။
မညျသညျ့လတှငျမဆို ၈၊ ၁၇၊ ၂၆ ရကျမှေးသူမြားကို ၈ ဂဏနျးသမားမြားဟုချေါသညျ။
အရာရာတှငျ ထိနျးခြုပျနိုငျသောစိတျရှိသလောကျ မတ်ေတာတရားတှငျထိနျးခြုပျနိုငျခွငျးမရှိ။ ခဈြသူကို အလိုလိုကျလှနျး၊ဦးစားပေးလှနျးသဖွငျ့ စိတျသောက ခံစားရတတျသညျ။ ခဈြသူကို အရာရာပွညျ့စုံစလေိုသဖွငျ့ ပေးဆပျတတျသော သဘာဝကွောငျ့ မိမိနှလုံးသားကို ခုတုံးလုပျခွငျး
သီးသနျ့ အေးခမျြးစှာနတေတျပွီးမနာလိုဝနျတိုခွငျးကငျးသော ကွီးမွတျသညျ့ နှလုံးသားအား ပိုငျဆိုငျသညျ။ မိမိကိုယျမိမိ အထီးကနျြဆနျကာ အားငယျ နတေတျသော ခံစားခကျြရှိသညျ။ သူတဈပါးပဈပယျထားသူကို စာနာစိတျ အပွညျ့နှငျ့ မတ်ေတာ ထားတတျသညျ။
-မငျးရဲ့ ဘဝဟာ ကွမျးတမျးလှနျးပါတယျ. ဘာကွောငျ့ဆိုတာ ဘယျသူမှ မငျးကို
-သူတပါးကို အပွဈပွောရာမှာ မငျးဟာ တဖကျကမျးခတျ ကြှမျးကငျြလှပါတယျ။
-အခွအေနကေ မပေးဘူးဆိုရငျတော့.. မငျ့ရဲ့မိဘတှကေိုတောငျ စောစီးစှာ
လကျလှတျရနိုငျပါတယျ.. ဒီလိုမြိုးအဖွဈအပကျြတှကေ မငျ့ဘဝထဲမှာ မကွာခဏဖွဈနမေယျအရာတှပေါ။
ဒီပွဿနာတှကေပဲ မငျးရဲ့ပညာရေးကို တားဆီးနပေါလိမျ့မယျ.. ဒါပမေယျ့ မငျးဟာ ဘဝကို တခွားနညျးနဲ့ လလေ့ာသငျယူနိုငျပါလိမျ့မယျ။
-မငျးဟာ တရားမြှတမှုအတှကျလညျး တိုကျပှဲဝငျရဲတဲ့သူတဈဦးပါ
-ပုံမှနျအားဖွငျ့..မိတျဆှတှေနေဲ့ဆကျဆံရာမှာ မငျးဟာ တညျကွညျလေးနကျစှာ နတေတျပမေဲ့
ဘဝကိုလညျး..အထီးကနျြစှာ ဖွတျသနျးနရေမယျ့သူပါ.. ပွီးတော့ တပါးသူကို ကူညီဖို့အသငျ့ရှိနသေူ တဈဦးပါ။
-မငျး အိမျထောငျကတြဲ့အခါမှာတော့ (အဲဒါကလညျး.. အမြားအားဖွငျ့ အလယျအလတျအရှယျမှာပဲဖွဈပှားတကျပါတယျ) မငျ့ရဲ့ကံကွမ်မာဆိုးအနညျးငယျဟာ လှငျ့ပြောကျသှားသလို ခံစားရပါလိမျ့မယျ..ပွီးတော့ မငျးဟာ လုံခွုံခမျြးမွမှေု့ကို ရရှိပါလိမျ့မယျ။
-မငျးဟာ မမြှျောလငျ့တဲ့အန်တရာယျတှကေိုလညျး..ယှဉျဆိုငျတှရေ့နိုငျပါတယျ.. ဥပမာ..(
-သို့ပမေဲ့… မငျးဟာ စညျးကမျးလိုကျနာတဲ့သူ..လုံ့လဝီရိယရှိသူ.ရဲရငျ့သူ..
-အဲဒါတှကေပဲ မငျးကို အောငျမွငျမှုဆီကို ချေါဆောငျသှားမှာပါ..
-မငျးဟာ မိသားစုရဲ့ အဓီက အစိတျအပိုငျးတခုပါ..အားကိုးရဆုံးသူတဈဦးလညျးဖွဈပွီး.. ဖိုကျတာတဈဦးလညျးဖွဈနပွေနျရော။
-မငျးရဲ့ အကောငျးဆုံးအဖျောမှနျကတော့.. 1, 4, and 8. သငျ့တျောတဲ့အဖျောမှနျကတော့5.
၄ ကို ၂ နဲ့ မွှောကျလို့ ၈ ရလာတဲ့အခါ ၄ ရဲ့နှဈထပျကှမျး
စှမျးအားတှပေါလာသလို စနရေဲ့ လှမျးမိုးခယျြလှယျမှုတှပေါ ပါဝငျလာပါတယျ။ ၈
ဂဏနျးစိုးမိုးသူတှကေတော့ ၈၊ ၁၇ နဲ့ ၂၆ မှာမှေးဖှားပါလိမျ့မယျ။ဒဏ်ဏာရီမှာတော့ ခွကြေိုးလို့ အမညျတှငျပွီး ကောငျးကငျမှာ ရခေဲဂွိုလျလို့မွငျနရေတဲ့ စနစေိုးမိုးသူ ၈ ဂဏနျးသမားတှကေတြော့ လြှို့ဝှကျတယျ။အေးတိအေးစကျနိုငျတယျ။မွုံစိစိသမားတှလေညျးဖွဈတယျ။စိတျခံစားခကျြအလှနျကွီးမားသူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။
သူတို့ကို အငျမတနျနားလညျပေးရပါလိမျ့မယျ။ ဘုဂလနျ့ကတြဲ့ ၄ ရယျ၊ အေးစကျစကျ ၈
ရယျကွောငျးဆကျဆံရေးဟာ မခြောမှနေို့ငျပါဘူး။ သတိထားရပါလမျ့မယျ။
သူတို့ရဲ့ အမြားနဲ့ မတူတဲ့ စတိုငျတှေ၊ စကားလုံးတှကွေောငျ့ စိတျထဲခိုးလို့ခုလုတော့ ဖွဈရမှာ ကြိနျးသပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူတို့မှေးဖှားရာရာသီတှကေ မကာရ၊ ကုံလိုမြိုးရာသီတှသောဆိုရငျတော့ သူတို့ရဲ့ ထူးခွားတဲ့စရိုကျတှကေ ပိုပျေါလှငျလာမှာပါ။
သူမြားတှကေို ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးမှာ ဖုထဈစတေဲ့ အဲဒီ ဂဏနျးနှဈခုဟာ
ဝဋျတော့ပွနျလညျပါတယျ။ ဘယျလိုလညျလဲဆိုတော့ ၄နဲ့ ၈ သမားနှဈဦးစလုံးဟာ
လူပြိုကွီး၊ အပြိုကွီးတှဖွေဈရငျ ဖွဈ၊ မဖွဈလို့ကတော့အိမျထောငျကနြောကျကတြော့တာပါပဲတဲ့။